Volleyball Archives - Sports Rifle 7/24
Volleyball Tatenda Gondo - March 20, 2021 0
The Sports and Recreation Commission of Zimbabwe had previously grouped sports into low, medium, and high risk categories as guidance for the smooth resumption of sports during this time of the covid-19 pandemic. On the 16th of March the SRC...
Premium Clothing Zimbabwe continues its winning streak with women sports
Volleyball Tatenda Gondo - March 14, 2021 0
Zimbabwe Ladies Beach Volleyball team secures a landmark deal with an online clothing shop. Zimbabwe Ladies Beach Volleyball team has secured a landmark deal with an online clothing shop Premium Clothing Zimbabwe. This is Premium Clothing Zimbabwe's second romance with ladies...
Volleyball Tatenda Gondo - February 24, 2021 0
Volleyball Tatenda Gondo - December 10, 2020 0
The Executive Committee of Harare Volleyball Association has warned volleyball clubs against resuming volleyball activities in the province. Sports and Recreation Commission has so far granted at least 32 sports codes the greenlight to resume training and activities, but Volleyball...
Volleyball Tatenda Gondo - December 6, 2020 0
Mxolisi Ndlovu who was last month elected as the Zone IV Treasurer was yesterday elected as the president of the Zimbabwe Volleyball Association. Zimbabwe Volleyball Association hosted their elective congress yesterday at Chevron Hotel in Masvingo. And two candidates namely...
Volleyball Tatenda Gondo - November 10, 2020 0
Zimbabwe Volleyball Association president Ringisai Mupondera was today elected as the Zone VI General Secretary. Mr Ringisai Mupondera takes over from Mozambican Khalid Cassam who was recently elected as the Zone VI president during last month CAVB elective elections. Last...
Volleyball Tatenda Gondo - October 26, 2020 0
Former Zimbabwe Volleyball Association president Frederick Ndlovu was elected as the vice president of Confederation of African Volleyball CAVB Zone 6 president at the organisation's elective congress held virtual via ZOOM. Zone six comprises mainly of countries in Southern African...
After 18 hours of voting Moroccan Hajij Bouchra was elected as the new Confederation of African Volleyball president. Bouchra Hajij, is the president of the Royal Moroccan Volleyball Federation. Before elections Hajij presented her manifesto for volleyball with particular emphasis...
Ndlovu eyes CAVB vice presidency post
Volleyball Tatenda Gondo - October 20, 2020 0
Former Zimbabwe Volleyball Association president Fredreck Ndlovu has thrown his hat for consideration of a post as the Vice president of Confederation of African Volleyball. CAVB will host its rescheduled elective Congress virtually on 24-25 October. Elective congress are held...
Tatenda Gondo - January 7, 2021 0
The Sports and Recreation Commission has approved the Zimbabwe Warriors trip to Cameroon where they will participate in the Total.CHAN 2020. Total CHAN 2020 takes...
FC Platium players and officials test positive of covid-19 ahead of...
Zenatha Coleman signed by Sevilla FC Femenino